Inbound Kushambadzira Kuputika | Martech Zone
NeChishanu, Kurume 23, 2012 Muvhuro, September 23, 2013 Douglas Karr
Sezvo inbound yekushambadzira agency, isu tinofunga zvinonakidza kuve vamiririri kumberi kweshanduko inoshamisa muindastiri indasitiri. Kubva kune vatengesi kune vagadziri, munhu wese ari kubhadhara zvakanyanya kutarisisa kune iyo hombe pikicha yekushambadzira kwepamhepo pane kushanda musilos kana nyaradzo nzvimbo. Kushanda pamasvikiro kunopa mibairo mikuru… asi hazvisi nyore!
Kushambadzira kwaiwanzo kunge kuri kwekubhadharira vateereri vako uye kuyedza kuvanyengera kubva pane chero zvavaimboita kare. Asi nekuda kwewebhu, mutambo wachinja. Kushambadzira kuri mukati kunosanganisira nzira dzinoverengeka dzinokwezva vatengi nekuvapa ruzivo rwakakosha, rwakakodzera. Uchishandisa kushambadzira kuri mukati, unogona zero kune vatengi vane shungu dzekutenga izvo zvaunotengesa. Isu tinotsvaga kuti kushambadzira kwakawanda kwakawanda kwakabata sei uye sei mabhizinesi ari kuwana kubudirira nako 2012. Kubva kuG +'s infographic, The Inbound Marketing Explosion.
Tags: Bloggingyakananga trafficinbound Marketingpamapejimutungamiri wechizvarwakushambadzira kunzeyakabhadharwa kutsvagaseoevanhu vezvenhau
Kuti shamwari yangu inoratidza kupera kwenguva uye iyo prime real estate yeumwe. Zvemagariro midhiya ndiro buzzword ... hazvishamise makambani ari kudirana kwairi seagulls kune sandwiches.
Ini ndinofunga sekudyarwa kwewebhu padiki zvakadaro, isu tichaona shanduko yebhizinesi futi. Kuti ushande mune ino nyowani yemagariro chikuva, iwe unofanirwa kuve unzanga. Uye mabhizinesi haana kujaira kuve munharaunda… zvinotyisa kwavari. Ivo vanofanirwa kudzidza kuve kana ivo vanofa. Plain uye yakapusa.
Vatengi havadi kunzwa sekunge vari kutengeswa kune. Inbound kushambadzira ndeyekubatana nehurukuro, pane kuitanga. Vatengi vane zvavanoda vanozoedza kutsvaga mhinduro. Kushanda pakushambadzira kuri mukati kunovandudza mikana yekuti iwe uchave mhinduro iyoyo.
Pakati pechati ichi - mavara akanganisa here? Kubuda ndiko pasi, Inbound ndiyo yepamusoro?
Ini ndinofunga wakarurama! @freighter akazviona patangotumira (whew… isu hatina kugadzira iyo!).